Hangzhou na-akwalite akụnụba njem nlegharị anya ya na Europe dum
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » Hangzhou na-akwalite akụnụba njem nlegharị anya ya na Europe dum
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • omenala • Denmark na -agbasa akụkọ • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
“Hangzhou, Poetry Living”-mmemme nkwalite isiokwu lekwasịrị anya na mgbanwe obodo ka akwadochara ọgbakọ G20.
Ihe ngosi nke Hangzhou Tourism Promotional Event na Copenhagen na ọnụnọ nke ndị nnọchi anya njem nlegharị anya site na Hangzhou na 56th CongressA Congress na Nọvemba nyere aka gosipụta njirimara pụrụ iche nke obodo a ma ama dị n'akụkụ akụkụ ndịda nke Osimiri Yangtze ma kwalite akụ MICE ya bara ụba.
Site na mwepụta nke China-Denmark Tourism Year n'afọ a, ndị nnọchi anya njem nlegharị anya nke Hangzhou, gụnyere ndị otu si Hangzhou Tourism Commission nke onye osote onye isi Zhuo Xinning duziri, Hangzhou Commerce and Tourism Group, Dragon Hotel, Hangzhou New China Tour na China Travel Ọrụ Zhejiang Group, nwere Hangzhou Tourism Promotional Event na Copenhagen. Ihe omume ahụ nyere ikpo okwu maka mgbanwe na ihe karịrị ụlọ ọrụ njem njem iri anọ na mpaghara na maka nkwalite nke njem nlegharị anya nke Hangzhou na azụ nke obodo nnabata nke nzukọ G40 afọ gara aga. Liu Dong, Consul of Culture na Embasii nke Ndị Republic of China na Denmark na Philip Kyhl, Director Business na Wonderful Copenhagen China, kwuru okwu abụọ na mmemme ahụ.
Ihe omume nkwado nke "Hangzhou, Living Poetry" lekwasịrị anya na mgbanwe obodo mgbe ọ nabatara nzukọ G20 na, site na iji usoro mgbasa ozi dịgasị iche, nye ndị bịara nkọwa zuru ezu banyere akụnụba njem nlegharị anya nke Hangzhou, na-egosipụta ọtụtụ obodo uru, n'etiti ha:
- Ebe ọdịbendị ọdịbendị nke ụwa, gụnyere West Lake na Beijing-Hangzhou Grand Canal;
- Ihe nketa ọdịbendị nke obodo, na-elekwasị anya na silk, obodo na ọdịbendị Buddhist pụrụ iche;
- Ihe ntụrụndụ ọhụụ nke mgbede, gụnyere arụmọrụ "Hangzhou, Living Poetry" na ihe ngosi ọkụ;
- facilitieslọ ọrụ MICE dị na mpaghara, gụnyere Hangzhou International Expo Center na ọtụtụ obodo anọ na ise nke kpakpando nke ndị isi ụlọ ọrụ ụwa na-achịkwa.
Mgbe ihe omume ahụ gasịrị, ọtụtụ ndị Denmark sonyere n'okporo ụzọ ahụ nwere njikọ kemgbe ọtụtụ ụlọ ọrụ gafere Hangzhou ka ha na-achọ ịpụgharị ụzọ njem njem ndị ọzọ na ngwaahịa na obodo ndị China.
Nzukọ ICCA nke iri ise na isii malitere na Prague Congress Center dị na isi obodo Czech na Nọvemba 56, 12. Ihe omume ụbọchị anọ ahụ chịkọtara ihe karịrị mmadụ 2017 si n'akụkụ ụwa niile, gụnyere ndị isi na ndị ọkachamara n'ofe obodo MICE, yana ndị na-ahazi ogbako. na ọkachamara ndi oru nta akuko. Ọnụ ọgụgụ nke ndị bịaranụ fọrọ nke nta ka okpukpu abụọ karịa nke afọ gara aga.
Nzukọ ICCA na-enye nnukwu ikpo okwu site na gọọmentị nke Hangzhou nwere ike igosipụta akụ MICE nke obodo ahụ na ndị na-ahazi ogbako sitere n'akụkụ ụwa niile, na-abawanye mmetụta ụwa niile nke ụdị MICE ma wuo ọwa n'èzí n'ahịa ụlọ ya. Nke a akara nke ugboro atọ na Hangzhou Tourism Commission esonye na Congress.
Site na ijide nzukọ nke G20 na 2016, Hangzhou emeela ka ọ dịkwuo mma na ọrụ nnabata ogbako ma meziwanye akụrụngwa obodo ya. Obodo ahụ enweela ọganihu dị ukwuu iji mepụta ọkachamara na ndị ọrụ MICE dị iche iche site na ịkwalite ọrụ mgbakọ ya. Na mgbakwunye na ịnọ ebe a nọrọ nwee nzukọ G20, Hangzhou bụkwa ebe a ga-eme Egwuregwu Eshia 2020, nnukwu ihe omume a na-atụ anya na ọ ga-eweta ohere ọhụụ na mpaghara MICE nke obodo. Iji kwalite ihe mgbaru ọsọ Hangzhou nke ịbụ obodo ọnụ ụzọ mba ụwa, gọọmentị mpaghara ewerewo usoro dị iche iche, gụnyere ịkwado akụ na ụba MICE na itinye ụkpụrụ dị mma maka mpaghara ahụ, na ebumnuche nke iwulite obodo ahụ na ebe mgbakọ mba ụwa kachasị elu. .
Nzukọ a na-enwe kwa afọ, nke Hangzhou Tourism Commission bụ onye na-esonye oge niile, wepụtara nkwalite akara ngosi "MICE Hangzhou" pụrụ iche na mpaghara mmekọrịta n'etiti ihe omume ahụ, na-enye ebe mgbakọ maka ngosipụta nke ụlọ ọrụ MICE nke Hangzhou ma na-egosipụta uru ya nye ndị ọbịa site na ikpughe akara. na na saịtị na mkparịta ụka otu-na-otu. Ọtụtụ ndị na-ahazi nzukọ yana ndị ọrụ mgbasa ozi MICE na ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ kwuru etu ihe ịga nke ọma nke G20 si mee ihe ịtụnanya maka itinye obodo ahụ n'ụzọ doro anya na map ụwa dịka njem ịga nzukọ na ebe ngosi.
Followinggbaso Nzukọ G20 ahụ, ndị ọrụ Hangzhou na-ahụ maka ọgbakọ na ngosipụta malitere ọrụ iji kwalite na ịkwalite njikwa na mkpochapụ nke "usoro mmepụta", site na ntinye na ntinye.
N'afọ a, Hangzhou ejirila usoro ụfọdụ iji kwalite akara ngosi "MICE Hangzhou". Ọganiihu na-aga nke ọma nke mgbasa ozi MICE zuru ụwa ọnụ na mgbasa ozi ahịa "MICE na Landscape" na Hangzhou na Paris, mpịakọta nke gọọmentị obodo nke usoro MICE na-eme nke ọma na ụzọ ngosi okporo ụzọ emere na China yana mba ọzọ, agawo ogologo ụzọ n'ịkwalite obodo ahu dika akara MICE. Ọhụụ ahụ bụ ịgbanwe obodo ahụ ka ọ bụrụ nke nwere ike iguzo n'akụkụ ya na ndị isi MICE ụwa dịka Paris, London na New York. Hangzhou ga-aga n'ihu na-enyocha ngwaahịa MICE ọhụrụ ma melite onyinye ọrụ, na-enye ụwa ohere ịchọpụta amara nke Hangzhou n'akụkụ uru agbakwunyere nke ngalaba MICE. Obodo ahụ emeela ka ọ bụrụ isi ihe dị mkpa iji dọta nnukwu nzukọ, na -emepụta ohere na-enweghị ngwụcha ma na-emezigharị mmetụta zuru ụwa ọnụ nke akara "MICE Hangzhou".